LEGO VIP Weekend အတွက်ဝယ်ရန်ငါးစုံ (နှင့်သင်မရနိုင်သောငါးခု)
20 / 11 / 2021 20 / 11 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 235 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona, ၁၀၂၉၄ တိုက်တန်းနစ်, ၂၁၃၂၃ Grand Piano, 42100 Liebherr R ကို 9800 တူးဖော်, 42131 CAT D11T ဘူဒိုဇာ, ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်, 71044 Disney ရထားနှင့်ဘူတာ, 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer, 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, နှစ်ချက်, VIP အမှတ်နှစ်ချက်, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Ideas, Lego, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ideas, Lego Star Wars, Lego Technic, LEGO.com, Star Wars, နည်းပညာ, အဆိုပါ LEGO Group, vip အချက်များ
အဆိုပါ Lego VIP တနင်္ဂနွေ ဒီမှာရှိပေမယ့် အကြီးကျယ်ဆုံးမော်ဒယ်အချို့က ရောင်းကုန်သွားပြီဖြစ်လို့ အမှတ်နှစ်ဆအများဆုံးရအောင် သင်ရနိုင်တဲ့ အတွဲငါးခုပါ။
p အဖြစ်art အဆိုပါ 2021 ၏ VIP တနင်္ဂနွေ, အ Lego Group သည် ဝယ်ယူမှုအားလုံးတွင် VIP အမှတ်နှစ်ဆကို ပေးဆောင်နေသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အကြီးမားဆုံး မော်ဒယ်အချို့ကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် သီးသန့်ဆုလာဘ်များ သို့မဟုတ် အနာဂတ်ဝယ်ယူမှုများဆီသို့ အရောက်လှမ်းနိုင်ရန် သင့်ခရက်ဒစ်ကို အမြန်ပြန်ဖြည့်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
သီတင်းပတ်ကုန်တွင် သင်၏အမှာစာများကို အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြီးဆုံးငါးခုကို စုစည်းထားပါသည်။ Lego တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးနှင့် အရောင်းကုန်သွားသည် သို့မဟုတ် ယာယီပြတ်သွားသည့် အခြားငါးခုတွင် သင်ဝယ်ယူနိုင်သေးသည့် မော်ဒယ်များ။
လက်ကျန် - LEGO Ideas ၂၁၃၂၃ Grand Piano
Lego Ideas ၂၁၃၂၉ Fender Stratocaster Theme ထဲမှာ ပထမဆုံး တူရိယာ အပန်းဖြေမှုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၁၃၂၃ Grand Piano အုတ်ခဲများဖြင့် စန္ဒယားတစ်လုံး၏ အထင်ကရ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို စိတ်ကူးပုံဖော်ထားသည့် ပိုကြီးပြီး အသေးစိတ်သော မော်ဒယ်လ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ထွက်ရှိကတည်းက အပ်ဒိတ်တစ်ခုပင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ သီချင်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်များထည့်ပါ။ အမှ Powered UP app ကို။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွင်ဖော်ပြထားသည် ပြန်လည်သုံးသပ် ဘို့ ၂၁၃၂၃ Grand Pianoစျေးနှုန်း £319.99 / $349.99 / €349.99 ကာလအတွင်း သင့်အား VIP အမှတ် စုစုပေါင်း 5,120 နှစ်ဆ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ VIP တနင်္ဂနွေ.
လက်ကျန် - LEGO Disney 71044 Disney ရထားနှင့်ဘူတာ
2021 ခုနှစ်မကုန်မီ အနားယူခြင်း၊ Lego Disney 71044 Disney ရထားနှင့်ဘူတာ တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင် ပစ္စည်းလုံးဝပြတ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကိုဝယ်ယူလိုသူတိုင်းသည် ခွဲဝေပေးရန်စတော့ရှယ်ယာများမရှိတော့သဖြင့် ကံမကောင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
လက်ကျန် - Harry Potter 75978 Diagon Alley
စဉ်းလဲနေသမျှ ကာလပတ်လုံး မနေနိုင်ပါဘူး။ ၁၀၂၉၄ တိုက်တန်းနစ်, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley စင်နှင့် Wizarding World ခင်းကျင်းပြသမှုများအတွက် သင့်လျော်သော ရှည်လျားသော ဖန်တီးမှုတစ်ခုသည် မှော်လမ်းကို အသေးစားအတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်းအသေးစိတ်ဖြင့် သစ္စာရှိရှိ ပြန်လည်ဖန်တီးပေးသည့် franchise နှင့် ရင်းနှီးသူတိုင်း သဘောကျမှာ သေချာပါသည်။
အချိန်ကန့်သတ်ထားလို့ အော်ဒါမှာပါတယ်။ 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley သင့်အား အခမဲ့ ခေတ်ဟောင်း ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုနှင့် 40484 Santa's Front Yard ကို ရရှိရုံသာမက သင့်အကောင့်သို့ ပေါင်းထည့်ထားသော အမှတ် 5920 ကိုလည်း မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
လက်ကျန် - လူကြီးများအတွက် LEGO 10294 တိုက်တန်းနစ်
UK တွင် £569.99 ၊ US တွင် $629.99 နှင့် Europe တွင် €629.99 ကုန်ကျသော်လည်း၊ မြင့်မားသောစျေးနှုန်း၊ လူကြီးများအတွက် Lego ၁၀၂၉၄ တိုက်တန်းနစ် တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင် လောလောဆယ် ယာယီပစ္စည်းပြတ်နေသောကြောင့် ၎င်းကို အော်ဒါမှာခြင်းမှ အများစုကို နှောင့်နှေးခြင်းမရှိပါ။ အချက်နှစ်ချက်ဖြင့် စတော့တွင်ရှိသောအခါ၊ ၎င်းသည် သင့်အကောင့်သို့ 9,120 ပေါင်းထည့်မည်ဖြစ်သည်။
လက်ကျန် - Technic 42100 Liebherr R 9800 Excavator
အကြီးဆုံးတွေထဲကတစ်ယောက်အနေနဲ့ Lego နည်းပညာ အချိန်တိုင်းမော်ဒယ်များ၊ 42100 Liebherr R ကို 9800 တူးဖော် မော်တာဒြပ်စင်များနှင့် ရွေ့လျားနေသော p များပါရှိသော လုပ်ဆောင်မှုအရှိဆုံးများထဲမှ တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။artအစစ်အမှန်ယာဉ်၏အင်္ဂါရပ်များကိုအတုခိုးသည်။
Lego နည်းပညာ 42100 Liebherr R ကို 9800 တူးဖော် CONTROl+ အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ အဝေးထိန်းခလုတ်အတွက် ရွေးချယ်စရာများ အပြည့်အစုံပါရှိသော သီးသန့်ပုံးဒြပ်စင်တစ်ခုပါရှိသည်။
လက်ကျန် - LEGO Harry Potter 71043 Hogwarts ရဲတိုက်
အထင်ကရ Hogw ၏ မိုက်ခရိုစကေးပုံစံarts Castle သည် ၎င်း၏တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင် ရေပန်းစားနေခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် စတော့မကျန်သေးပေ။ LEGO.comဒါပေမယ့် ခဏတာ။ အရင်စတော့ များများရနိုင်ဖွယ်မရှိပါဘူး။ VIP တနင်္ဂနွေ ပြီးသွားပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ်။ LEGO စတော့အိတ်သတိပေးချက်များ ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဆိုတာသိဖို့။
လက်ကျန် - လူကြီးများအတွက် LEGO 10284 Camp Nou - FC Barcelona
တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင် အမှာစာဖြင့် အခမဲ့ပစ္စည်းများကို နှစ်သက်သူများအတွက် ဤထည့်သွင်းမှုသည် အသုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona လက်ဆောင်အဖြစ် နှစ်ယောက်စလုံးကို လက်ဆောင်အဖြစ် ရယူလိုက်ပါ။art ၏ VIP ပိတ်ရက် နှင့် များစွာသောအချက်များ - သေးငယ်သောစကေးဖြင့် ဖမ်းယူထားသော လက်မတိုင်းတွင် FC Barcelona ၏နေအိမ်ကို သရုပ်ဖော်ထားသည့် တည်ဆောက်မှုကို ဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။
လက်ကျန် - LEGO Star Wars 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon
ဟိုးအဝေးက နဂါးငွေ့တန်းကြီးထဲမှာ Lego Star Wars 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon သက်တမ်းတိုးကာလအတွက် စတော့မှာ နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့သည်။ ခေတ်အဆက်ဆက် စျေးအကြီးဆုံး မော်ဒယ်သည် လူကြိုက်များသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေခဲ့သည်။ LEGO.com လတ်တလောတွင် ပစ္စည်းပြတ်နေပါသည်။
လက်ကျန် - LEGO Star Wars 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer
မင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသဖို့ Star Wars မင်းရဲ့ကြားမှာ Lego စုဆောင်းမှု, 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer သေးငယ်သောရုပ်ပုံနှစ်ပုံနှင့် 4,784 အပိုင်းများပါ ၀ င်ပြီး ၀ ယ်ယူနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ VIP အမှတ် 10,000 ကျော်ရယူလိုသူများအတွက် VIP ပိတ်ရက်ဤအစုံသည် သင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။
လက်ကျန် - LEGO Technic 42131 အက်ပ်-ထိန်းချုပ်ထားသော CAT D11 ဘူဒိုဇာ
စဉ် 42100 Liebherr R ကို 9800 တူးဖော် အသစ်ကို အွန်လိုင်းမှာ မှာယူလို့ရပါသေးတယ်။ 42131 App-Controlled Cat D11 Bulldozer ဖြစ်သည် မကြာသေးမီကထွက်ရှိထားသော်လည်း ရောင်းထွက်နေပြီဖြစ်သည်။ LEGO.com. ၎င်းကိုရရှိနိုင်သောအခါ၊ သင်သည် တကယ့်ဘူဒိုဇာတစ်စက်၏ အင်္ဂါရပ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကို ဖန်တီးမှုနေရာချထားရန်နှင့် ရွှေ့ရန် CONTROL+ အက်ပ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
← Lego အသစ် Stranger Things အစုံ 2022 များအတွက်ကောလဟာလသတင်းများအရ
နောက်ဆုံးထွက် LEGO VIP ထီဆုကြီးများတွင် ဘွန်ဆိုင်းကြီးတစ်လုံးကို ရယူလိုက်ပါ။ →